खेलकुदआइतबार, १९ श्रावण , २०७६
सिंगापुरमा भएको टी–२० विश्वकपको ग्लोबल छनोटका लागि १० साउनमा कुवेत विरुद्ध खेल्नुअघि नेपाली टोली ।
एउटा अपत्यारिलो घटना भयो । आफूभन्दा कमजोर मानिंदै आएको कतार र सिंगापुरसँग नेपाल हार्‍यो । र, टी–२० विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायरमा छनोट हुन सकेन ।
नसोचून् पनि किन ? नेपाल टी–२० विश्वको ११औं वरियताको राष्ट्र हो । टोलीसँग एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । सन् २०१४ मा नै टी–२० विश्वकप खेलिसकेको छ । स्तरीय खेलाडी छन् । तर स्थिति विपरीत देखियो ।
गएको १ चैतमा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट (ओडीआई) राष्ट्रको मान्यता पाएको नेपाली टोली त्यसको १८ महीनापछि टी–२० विश्वकप यात्राको छनोटको दोस्रो चरणमै पराजित हुनपुग्यो । टोली तेस्रो स्थानको लागि मात्र योग्य भयो ।
नेपाली टोलीमा ठूला नाम छन् । उनीहरूले विगतमा क्षमता देखाएकै हुन् । एकदिवसीयसम्मको यात्रामा खेलाडीहरूले गरेको मिहिनेत र संघर्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट समुदाय कायल छ । तर यसपालि नेपाली टोलीलाई के भयो ? क्रिकेट समुदाय छक्क परेका छन् । नेपालको कमजोर प्रदर्शन सहितको बहिर्गमनले धेरै प्रश्न उब्जिएका छन् ।
नेपाली टोलीको ब्याटिङ फेरि पनि कप्तान पारस खड्कामा मात्र केन्द्रित हुनपुग्यो । ज्ञानेन्द्र मल्ल र शरद भेषवाकरको प्रयास ग्लोबल क्वालिफायर स्तरको थिएन ।
शुरुआती मुख्य खेलाडीहरू बाहिरिइसकेको अवस्थामा मध्यक्रमले गरेको ‘एमेच्योर शो’ झनै गैरजिम्मेवार थियो । लाग्थ्यो, जिम्मेवारी लिंदै इनिङ सम्हाल्नेतिर कसैले सोचेकै छैनन् । उनीहरूलाई छक्का, चौका हान्ने हतारो थियो । तर, विकेट भने जोगाउन सकिरहेका छैनन् ।
कतिपय आलोचकको भनाइमा नेपाली खेलाडी अति आत्मविश्वासीको शिकार भए, विपक्षीलाई कमजोर आँके । टोलीमा निश्चित रणनीति नै देखिएन । विपक्षीको समीक्षा भएन । विपरीत सिंगापुरले नेपाली खेलाडीहरूको क्षमता र कमजोरीको गहन अध्ययन गर्‍यो र त्यही अनुरुपको रणनीति रच्यो ।
बलिङ सधैं नै नेपाली टोलीको शक्ति रहँदै आएको थियो । नेपाली बलरहरूले विपक्षीलाई खुलेर खेल्नै दिंदैनथे । फिल्डिङ पनि चुस्त मानिन्थ्यो । तर, यसपटक त्यस्तो केही देखिएन । नेपाल विरुद्ध २० ओभरको खेलमा १९१ रन यसअघि कुनै टोलीले बनाउन सकेको थिएन । सिंगापुरले आरामसँग बनायो ।
वसन्त रेग्मीको अफ स्पिनमा तागत देखिएन । ४–५४ शायद उनको अहिलेसम्मकै खराब प्रदर्शन गनिएला । जल्दाबल्दा स्टार लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने पनि निर्णायक बन्न सकेनन् । सन्दीप पनि ३–३४ को आँकडामा थिए ।
पछिल्ला दिनहरूमा बलिङको धार स्पिनरबाट तेज बलिङतिर स्थानान्तरण हुन खोजे जस्तो पनि देखिएको छ । तर सोमपाल, अविनाश बोहोरा, ललितनारायण राजवंशीको बलमा पनि खेल उल्ट्याउने दम देखिएन, कम्तिमा सिंगापुरसँगको खेलमा ।